UPaco Roca. "Ndigqiba ikhomikhi entsha: Buyela e-Eden." | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | IiComics, Udliwano-ndlebe, Izaziso
Ukufota: iwebhusayithi kaPaco Roca.
UPaco Roca (IValencia, 1969) ngomnye wabadlali bethu inoveli ehlekisayo kunye nemifanekiso elandelwa kakhulu, edumileyo neyamazwe aphesheya. Inoveli yakhe yemizobo Imibimbi Wayibeka phezulu kuhlobo olukhethekileyo kwaye, kwangaxeshanye, yahluka kakhulu kwaye iyaqhubeka. Y okokugqibela ngoJulayi 25 iphumelele enye yodumo Amabhaso ka-Eisner yi Indlu, Umsebenzi osenyongweni kakhulu kwaye buqu uzinikele kuyise.
Kuluyolo ukuba undinike le nto Udliwanondlebe endiluxabisa kakhulu, ngexesha lakho elinikezelweyo kunye nobubele beqela lakho lonxibelelwano. Kuyo usixelela ngeyakhe iimpembelelo, Ekuqaleni iinkumbulo kunye iprojekthi entsha eya kukhutshwa ngo-Novemba: Buyela e-eden.
Udliwanondlebe noPaco Roca
UNCWADI NAMHLANJE: Usakhumbula laa mfanekiso wokuqala owawubonayo okanye owawuthelekelela wakukhuthaza ukuba uzobe?
IPACO ROCA: Ngokuqinisekileyo zazikho ezinye kwangaphambili, ii-vignettes ze IMortadelo kunye neFayilemon, de I-Astérix… Kodwa Idabi leenkwenkwezi Inokuba yenye yezo zinto zindikhuthaze ngokuthe ngqo. Ngokukhawuleza ndigqibile ukumbona, ndifuna uyihlaziye, kwaye indlela ekufuneka ndiyenzile ibiyiyo zoba eyam ikomiki malunga nomdlalo bhanyabhanya. Ngale ndlela yamaxesha okukhumbula ekhethekileyo yintoni iyaqhubeka indithatha ndiyenze iziqhulo.
AL: Nguwuphi umsebenzi okanye umbhali oye wakuchaphazela kakhulu kwaye kutheni uziqaqambisa?
PR: Kuya kubakho imisebenzi emininzi kunye nababhali abandichaphazelayo. Kwimizuzu yonke yobomi ufumanisa imisebenzi ekukhuthazayo. Kowokuqala kuya kuba zii-albhamu ze Tintin kunye nomzobo ococekileyo kaHergé. Iiparacuellos, de UCarlos GimenezKwandichaphazela ngelinye ixesha ebomini bam. Kude kube ngulo mzuzu iiqhulo ebendizifundile zazimalunga namabali ama-epic, abahloli kunye namaqhawe. Kwaye ngequbuliso ndajongana nebali elilula, labantwana kwikhaya leenkedama. I-epic yeemvakalelo.
AL: Yeyiphi incwadi yamahlaya okanye umlinganiswa wenoveli yomzobo onokuthanda ukudibana naye okanye wenze?
PR: KuKapteni Haddock. Ndandimthanda ukukhathazeka kwakhe, ukuthanda kwakhe iwhiskey, kunye nesichazi-magama sakhe esisityebi xa kufikwa kumba wokufunga.
AL: Ngaba kukho naziphi na izinto ozithandayo xa kufikwa kumzobo?
PR: Andinazo izinto ezininzi zokuzonwabisa. Mhlawumbi unayo umculo ongasemva. Ndikufumanisa kunzima ukuzoba ndithule.
PR: Nangona ndikhetha ukuzoba Isifundo sam ngokukhanya okuhle kunye nentuthuzelo, ukuzoba kwitafile yegumbi lokutyela, kwi hotele, kuloliwe ... kunye Ndikhetha intsasa ngenjika Langa.
AL: Usatyala ntoni Imibimbi?
PR: Yonke into endinayo. Imibimbi Indibeke emephini kwaye iyaqhubeka indinika uvuyo ngalo lonke ixesha ipapashwa kwelinye ilizwe okanye kwelinye. Oko kwapapashwayo ubomi bam butshintshile, ndakwazi ukuphila ngokuhlekisa kwaye, ngcono okanye kokubi, andikhange ndibeneveki yoxolo ukusukela ngoko.
AL: Kwi Ubusika bekhathuni uthatha indawo yokupapasha indlu yasentsomini yeBruguera kunye namagama abaluleke kakhulu kwiikhomikhi zaseSpain. Ungagcina ekhethekileyo?
PR: Nge Escobar. Nangona maxa wambi uburharha bakhe babungenaxesha, ndandisoloko ndiyithanda indlela yakhe yokuzoba. Kwaye okungakumbi endikwaziyo malunga no-Escobar, kokukhona ndiye ndamncoma njengomntu kwaye njengegcisa elingenaxhala elinakho ukubhala, ukuzoba okanye ukuqamba izixhobo ezingaqhelekanga.
AL: Uhlobo lwakho oluthandayo ngaphakathi kwinoveli yemifanekiso?
PR: Ndiyayithanda imbali, i-biografi, kodwa ngaphezulu kwayo yonke amabali abalinganiswa abanamandla oko kuyandonwabisa.
AL: Ngaba zikhona iiprojekthi ezintsha ezizayo?
PR: Ewe, ndigqiba i-comic entsha ukuba konke kuya kuhamba kakuhle kuya kuphuma ngo-Novemba. Uya kubizwa Buyela e-eden kwaye imalunga nefoto, ekuphela komama wayenaye nonina.
AL: Ucinga ukuba imeko yokupapasha injani, ngokukodwa yeekomikhi kunye neenoveli zemizobo, kubabhali abaninzi njengoko kukho okanye bafuna ukuqala ukupapasha?
PR: Ukuphila ngokwenkcubeko kunzima kulo naluphi na uqeqesho. Ukukwazi ukuphila ngokugcina iirekhodi, iincwadi okanye iicomics ozithengisayo akukho lula. Kodwa incwadi yokuhlekisa yenye yezona zikhululekileyo ezikhoyo, ungayixelela into oyifunayo ngaphandle komda. Kwaye nangona intengiso yethu incinci, ndicinga ukuba ibanzi kweli hlabathi libonakalayo sihlala kulo. Andikwazi ukucinga ngomsebenzi ongcono.
AL: Ngaba ixesha lobunzima esiphila kulo linzima kuwe okanye uya kuba nakho ukugcina into elungileyo kwimisebenzi ezayo?
PR: Nangona imisebenzi ethile enjengababhali bamahlaya isetyenziselwa isizungu nokuvalelwa, oku kuvalelwa kusifikele sonke. Kodwa ngaphakathi kwidrama ukuba le meko ibikhona, Ndiye ndakwazi ukuwasebenzisa.
Ndifunde kakhulu, ndibone uthotho lwabahlobo bam endincomelayo kwaye bendingenalo ixesha lokulibona, ndiyivuselele iposi kwaye ndikwazile ukusebenza ngaphandle kokuphazamiseka kohambo lwam oluqhubekayo. Ukuma kufuneka kusinike ithuba lokucinga ngento esiyithandayo nesingayithandiyo ngobomi esibuphilayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Udliwano-ndlebe » UPaco Roca. "Ndigqiba ikhomikhi entsha: Buyela e-Eden."